Xiddiga Barcelona Philippe Coutinho Oo Diiday Inuu Meesha Ka Saro Ku Laabashada Liverpool
HomeHoryaalka IngiriiskaXiddiga Barcelona Philippe Coutinho oo diiday inuu meesha ka saro ku laabashada Liverpool
December 1, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Kubad sameeyaha Barcelona Philippe Coutinho ayaa diiday inuu meesha ka saaro ku laabashada Liverpool iyo Premier League mustaqbalka.
Xiddiga reer Brazil ayaa ka soo ciyaaray Anfield intii u dhaxeysay 2013 iyo 2018, halkaasoo uu 54 gool ku dhaliyay 201 kulan oo uu u saftay Reds ka hor inta uusan u wareegin Camp Nou.
Coutinho ma uusan gaarin heerkiisii ​​caadiga ahaa tan iyo markii uu yimid Catalonia, laakiin halka South America uu ku riyaaqay door muuqda oo kooxda intii uu hogaaminayay Ronald Koeman , wuxuu ku adkeystay inaan waxba laga diidi karin la xiriirta soo laabashada Premier League.
Isaga oo la hadlaya World Soccer Magazine , Coutinho ayaa yidhi: “Horyaalka Premier League waa mid ka mid ah horyaalada ugu xiisaha badan adduunka, in aan fursad u helo in aan u ciyaaro koox sida Liverpool oo kale ah mar walba waxay noqon doontaa wax aan aad ugu mahad naqi doono.
Waa wax aan macquul aheyn in la yiraahdo waxa dhici kara ama dhici karin mustaqbalka. Laakiin haatan hadafkeyga kaliya waa inaan la guuleysto Barcelona.
Coutinho ayaa dhaliyay goolkii seddexaad ee Barcelona kulankii ay 4-0 ku xasuuqeen Osasuna isbuucaan, taasoo aheyd 28 jirkaan goolkiisii ​​shanaad ee xilli ciyaareedkaan tartamada oo dhan.
Ciyaaryahankii hore ee Liverpool ayaa qandaraas kula jooga Camp Nou ilaa dhamaadka ololaha 2022-23.